UAsus uqinisekisa amandla ebhetri eza kuthi iZenFone 6 ifike | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Zenfone 6 ibumba ukuba ibe ngumbulali omtsha wenkampani. Ukuvuza kwangaphambili kwefowuni kutyhile ukuba iyakubonisa ngokungabonakaliyo kunye neekhamera zangasemva ezihamba ngenjini eziphindwe kabini njengeekhamera zangaphambili.
Izolo, uAsus uqinisekisile into ebalulekileyo kwifowuni ngeakhawunti yakhe ye-Twitter, kwaye yayiyiyo umthamo webhetri oya kuxhobisa.
I-Zenfone 6 inamahemuhemu okuba ibhetri ye-5,000 mAh, kwaye ngokuqinisekileyo, umenzi waseTaiwan uqobo uyakuqinisekisa oku. Iflegi entsha ye-ASUS, enyanisweni, iya kuba nebhetri enkulu yomthamo osele uthethiwe, owenza oko ifowuni yesibini yeflegi esungulwe kulo nyaka ngebhetri ye-5,000 mAh. Eyokuqala yayiyi Nubia Red Magic 3, eyabhengezwa nge Snapdragon 855 kunye nezinye izinto ezikumgangatho ophezulu kunye neenkcazo.
5000> 1 + 7 + 3700, ke kutheni ukhetha oqhelekileyo xa unako #DefyOrdinary? #ZenFone6 pic.twitter.com/x8R24953mS
-USUS (@ASUS) Ngamana 14, 2019
UAsus akaqinisekisanga kuphela umthamo webhetri, kodwa Uhlekise nge OnePlus 7 ngexesha elinye. Le ine-3,700 mAh ibhetri eples xa ithelekiswa neZenfone 6. Nditsho ne-4,000 mAh ibhetri kwi OnePlus 7 Pro Ilahla ngasemva koku, nangona inkulu kancinci kunemodeli yayo esemgangathweni.
UAsus ngokuqinisekileyo uthatha i-OnePlus 7 ngesixhobo sayo esitsha kwaye, ukuza kuthi ga ngoku, sele iphumelele kwezinye iindawo. I-Zenfone 6 'ine-screen-to-body ratio ephezulu, njengoko ikwamkela uyilo olungaphezulu' olungenanto 'kunye' olungenamngxunya 'kune-OnePlus, kubonakala ngathi. Ikwanayo nejack yeaudio, indawo ezinikezelweyo yamakhadi e-microSD (itreyi yamakhadi amathathu), kunye nebhetri enkulu kakhulu, yile nto besithetha ngayo ngasentla. Sibheja i-ASUS iya kufuna ukuphumelela xa kuziwa kumaxabiso, nawo.
Isixhobo siya kuvula kumcimbi weeyure. Umnyhadala uya kusasazwa ngqo ukuze ubukele kwi-intanethi. Apho sinokuthi sazi ezinye iimpawu zeli flegi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UAsus uqinisekisa amandla ebhetri eya kuthi ifike ngayo iZenFone 6
Iifoto zikaGoogle ziya kuyeka ukuvumelanisa neGoogle Drayivu ukusuka ngoJulayi